Accueil > Gazetin'ny nosy > Andranomanelatra Antsirabe: Basy « pistolet » tratra niaraka tamin’ny bala mahery vaika
Andranomanelatra Antsirabe: Basy « pistolet » tratra niaraka tamin’ny bala mahery vaika
Basy « Pistolet Automatique » vita gasy indray no saron’ny zandarimariam-pirenena tao Soamahavoky Kaominina Andranomanelatra ny takarivan’ny Alakamisy 28 desambra lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva.
Lehilahy iray atao hoe Razoany avy ao Anosimboahangy no nahatratrarana ity basy ity niaraka tamin’ny bala 9 mm enina, izay fantatra fa nototofany ravin-kesika. Araka ny voalazan’ireo mpitandro ny filaminana dia tsy ity fikarohana basy ity loatra no anton-dia, fa niainga tamin’ny resaka vaky trano tao Soamahavoky. Raha ny tombana nataon’ireto mpitandro ny filaminana avy ao amin’ny Poste avancé Andranomanelatra ireto dia heverin’izy ireo fa mety hisy ifandraisany amin’ny raharaha Marius izay jiolahy lavon’izy ireo ny herinandro lasa teo. Mpiara-miombon’antoka mavitrika amin’ireto mpitandro ny filaminana ao Andranomanelatra ireto ny Kaominina, indrindra fa ny tohana ara-pitaovana mandritra ny fisamborana ireo olon-dratsy. Io maraina io ihany dia efa natolotra ny fampanohavana i Razoany, ary vesatra hanenjehana azy amin’izany ny fitazonana basy tsy ara-dalàna.